Man'eewwan, yk tarreewwan ykn tarjaawwan gabatee tokko keessaa yammuu saagduu ykn haqtuu, dirqalawwanii Amala tareewwan/tarjaawwanii akkaataa miseensooti ollaa jiran itti dhiibbifaman murteessa. Fakkeenyaaf, gabatee keessatti tarreewwan fi tarjaawwan haaraa qofaa rogoota tarree fi tarjaa dhaabbataa saaguu dandeessa yoo iddoon hayyamee.
Amalii kun kan jijjiirama isa yabbina tarjaa gabateecuqoo fayyadamuudhaan tahe qofaaf gataa'a. hantuuttee fayyadamuudhaan jijjiirama yabbina tarjaa kamiiyyuu gochuu nidandeessa.
Jijjiiramnii Dhaabii, guutuummaa gabatee irratti ossoo hintaanee, man'ee cinaa qofaa dhiibbessa. Yammuu man'ee tokko bal'istu, man'een cinaa nidhiphata. Garuu bal'nii gabatee akkuma jirutti taa'a.
Jijjiiramnii Dhaabii, walgituu, guutuummaa gabatee irrattitu jijjiiramni taha, bal'inii man'eewwanii, man'eewwan dhipphoo caalaa walitti galu. Fakkeenyaaf, yammuu man'ee tokko bal'istu, man'een cinaa akka walgituuti dhiphata. Garuu bal'nii gabatichaa akkuma jirutti taa'a.
Jijjiiramnii Jijjiiramaa hagamtaa gabatichaa dhiibbessa. Fakkeenyaaf, yammuu ati man'ee bal'istuu, bal'inii gabatichaa niguudata.
Title is: Gabateecuqootiin, Tarreewwanii fi Tarjaawwan haarmsuu